तुलसीपुरमा फोहर बिसर्जन : व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट, खोलामा फोहर – Radio Bageshwori FM 94.6 MHz
साविकको तुलसीपुर नगरपालिकाले स्थानीय तहको फोहर व्यवस्थापनका लागि करिब पौने करोड रुपैयाँ खर्च गरेर तात्कालीन फूलवारी गाविसको तुइखोलामा जग्गा खरिद गरेको करिब एक दशक नाघेको छ । बजार क्षेत्रमा फोहर बिसर्जन गर्ने विकल्प नरहेको भन्दै तात्कालीन कार्यकारी अधिकृत हरिभक्त कँडेलका पालामा नगरपालिका बोर्डले पासगरी फूलवारीमा सो मूल्य बराबरको जग्गा खरिद भयो ।
त्यसपछि मुलुकमा स्थानीय चुनाव भयो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आए । साविकको फूलवारी गाविस तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गाभियो । तर त्यसताका करिब पौने करोड रुपैयाँमा खरिद भएको डम्पिङ साइटको जग्गा अहिलेसम्म पनि प्रयोगविहीन छ । फोहर खोला र चिरामा फालिँदै आएको छ । हरेक बर्षका नीति र कार्यक्रममा भनिने गरेको फोहरलाई मोहर बनाउने अभियान तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दिवा सपनाजस्तै भएको छ । हरेक बर्ष फोहर व्यवस्थापनका नाममा विनियोजन गरिने बजेटले न फोहर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन निकास दिन सकेको छ । नत फोहरको पुनप्र्रयोगको थालनी भएको छ ।
फोहरबाट जैविक मल बनाउने नाममा धेरै कन्सल्टेन्सीहरुले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा प्रस्ताव दर्ता गराए । छलफल पनि भए । केही कन्सल्टेन्सीले फोहरबाट वायोग्यास बनाउने प्रस्ताव ल्याए, तर कुनै पनि प्रस्तावले मूर्त रुप लिन सकेका छैनन् । बजारको फोहर उपमहानगरपालिकाले किन्ने भाषण नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले धेरै कार्यक्रममा गरे, तर अहिलेसम्म उपमहानगरपालिकाले गल्ने र नगल्ने फोहरसमेत छुट्याउन सकिरहेको छैन ।
फोहर जथाभावी फालिँदा किसानका खेतबारीमा सीसै सीसाका टुक्रा यत्रतत्र छन् । कुला, खोला र नालामा फालिएको फोहरले पानी प्रदूषित मात्र भएको छैन, प्लाष्टिकजन्य सामग्रीहरुसमेत किसानका खेतबारीमा पुग्छन् । तर नगरपालिका चुइक्क बोल्दैन । किनकि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कहिले यो चिरा, कहिले ऊ चिरा त अहिले पातुखोला बगरमै फोहर व्यवस्थापन गरिरहेको छ । कुनै बेला पातुखोलामा ठूलो भल आयो भने सामान्यरुपमा गाडिएको फोहर बगेर किसानका खेतबारीमा पुग्ने छ । त्यसमा अस्पतालजन्य फोहरसमेत पुग्न सक्ने नगरवासीहरु बताउँछन् ।
विश्वलाई नै कोभिड–१९ को महामारीले तर्साइरहेका बेला फोहर व्यवस्थापनलाई हरेक मुलुकले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्राथमिकतामा फोहर व्यवस्थापनले अर्थपूर्ण परिणाम हासिल गर्न नसकेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ का स्थानीय व्यवसायी जनकप्रसाद खरालले बताए । ‘फोहरको बैज्ञानिक व्यवस्थापनमा उपमहानगरपालिकाको अर्थपूर्ण पहल देखिन सकेको छैन, विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीको अवस्थामा पनि नगरमा उत्पादित फोहरको बैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्नु दुर्भाग्यको विषय हो’, युवा व्यवसायी खराल भन्छन् । फोहर व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उपमहानगरपालिका यो संक्रमणका बेला विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा यसलाई हरेक बर्ष नाराका रुपमा मात्र सीमित राखिनुलाई नगरबासीले चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
‘फोहरको पुनप्र्रयोग हुन सक्दछ, फोहर व्यवस्थापन आयआर्जनको माध्यम पनि हुन सक्दछ, तर यसको बैज्ञानिक व्यवस्थापनमा अर्थपूर्ण पहल हुन सकेको छैन’, तुलसीपुरका अर्का व्यवसायी तथा स्थानीयवासी विनिल केसीले भने । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको मासु मण्डीको व्यवस्थापन होस् वा डम्पिङ साइटका लागि खरिद भएको जग्गाको पुनप्र्रयोग होस्, कतै पनि यो बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । उपमहानगरपालिकाको ध्यान पुगेको देखिएन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी बजेटमा स्थाायी ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापनका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । तर फोहरको वैज्ञानिक एवं दीर्घकालीन व्यवस्थापनका कुनै कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन ।
फोहरलाई मोहरमा बदल्न र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न स्थायी ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्था र फोहरलाई वर्गीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि १ करोड रकम विनियोजन गरिएको उपप्रमुख माया शर्माले जानकारी दिएकी छन् । फोहर गर्ने व्यक्तिको विवरण दिनेलाई पुरस्कार दिने नीति ल्याएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ का लागि सो रकम विनियोजन गरेको हो । त्यस्तै उपमहानगरपालिकाले बेवारिसे लाश र मरेका चौपायाहरुको तत्काल व्यवस्थापन गर्न ५ लाख, अस्थायी ल्याण्डफिल साइटको मर्मत तथा व्यवस्थापनमा १० लाख विनियोजन गरिएको छ । तर स्थायी ल्याण्डफिल साइट कहाँको हो भन्नेसमेत उल्लेख छैन । फूलबारीमा खरिद गरिएको ल्याण्डफिल साइटको जग्गा स्थायी डम्पिङ साइटका लागि हो वा होइन भन्ने पनि उपमहानगरपालिकाले केही बोलेको छैन ।
त्यस्तै आकस्मिक नाला सरसफाई कार्यक्रमको लागि २५ लाख विनियोजन गरिएको छ । साथै उपमहानगरपालिकाले पूर्ण सरसफाईयुक्त नगरका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने बताएको छ । तुलसीपुरलाई प्लाष्टिकमुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गरिएको उपपप्रमुख शर्माले जानकारी दिएकी छन् । यो पनि पुरानै कार्यक्रम हो । करिव आधा दशकदेखि उपमहानगरपालिकालाई प्लाष्टिकमुक्त बनाउने अभियान नगरपालिकाले मात्र होइन, नापतौल तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालय तुलसीपुरले पनि ल्याएको थियो । तर न कार्यान्वयन भो, नत कारबाही नै । तुलसीपुरमा दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइट बन्ला ? यो प्रश्नको उत्तर नगरबासीले पाएका छैनन् ।
संयुक्त बामगठबन्धनद्धारा नेपालगञ्जमा घरदैलो अभियान
नेपालगञ्ज, कार्तिक–२८ । संयुक्त वामगठबन्धनले नेपालगञ्जमा घरदैलो अभियान शुरु गरेको छ । क्षेत्र नं. २ र प्रदेश सभा ‘ख’ मा पर्ने नेपालगञ्ज बजारबाट वामगठबन्धनले घरदैलो अभियान शुरु गरेको हो । क्षेत्र नं.
छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु, ४३ घाइते
नेपालगञ्ज, कार्तिक–२६ । छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४३ जना घाइते भएका छन् । कैलालीमा बस दुर्घटना हुँदा तीनजनाको ज्यान गएको छ । ३३ जना घाइते भएका छन् । आज बिहान बैतडीको मेलौलीबाट
सुर्खेत बराहतालका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न बिज्ञहरुको सुझाव
नेपालगञ्ज, कार्तिक–२६ । सुर्खेत जिल्ला सदरमुकामबाट २० किलोमिटर पश्चिम बराहताल गाउँपालिका–८ भट्टेघारीमा बस्दै आएका करिब एक सय ५० घरधुरीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन ्। स्थ
न्युज हिरमिनियामा मैत्रीपूर्ण फुटबल सम्पन्न
न्युज यातायात व्यवसायी भन्छन् : यात्रुको स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर सार्वजनिक यातायात चलाउछौं